Emeela beta ikpeazụ nke Snort 3, sistemu nchọpụta netwọkụ netwọọk | Site na Linux
na Ndị mmepe Cisco wepụtara nsụgharị beta ikpeazụ usoro mgbochi intrusion "Agụụ 3" nke ka emeputara ohuru, ebe ọ bụ na maka ụdị ọhụrụ a, ndị mmepe na-arụ ọrụ na echiche nke ngwaahịa ahụ kpamkpam e degharịrị ụkpụrụ ụlọ ahụ.
N'etiti akụkụ ndị e mesiri ike N'oge nkwadebe nke ụdị ọhụrụ ahụ, ndị simplified ntọala na igba egbe nke ngwa, nhazi akpaaka, mfe nke iwu iwu asụsụ, na akpaka nchọpụta nke niile ogbugba ndu, ndokwa nke shei maka nchịkwa akara nchịkwa, iji ọrụ nke multithreading na nnweta njikọ nke ndị ọrụ dị iche iche maka otu nhazi.
1 Banyere Snort
2 Snort 3 ikpeazụ beta isi
Maka ndị na-amaghị Snort, ị kwesịrị ịma na eNke a bụ usoro nchọpụta intanetị netwọkụ, n'efu na n'efu. Enyele ike na-echekwa na ndekọ na faịlụ ederede na ọdụ data oghe, dị ka MySQL. Ọ na-eme nchọpụta nchọpụta ọgụ na injin nyocha n'ọdụ ụgbọ mmiri nke na-enye ohere ịdenye aha, ịdọ aka na ntị na azịza ọ bụla akọwapụtara na mbụ.
N'oge echichi ya, na-enye ọtụtụ narị nzacha ma ọ bụ iwu maka azụ, DDoS, mkpịsị aka, FTP, mwakpo weebụ, CGI, Nmap, na ndị ọzọ.
Ọ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe ntanetị na ihe nchịkọta. Mgbe otu ngwugwu kwekọrọ n'ụkpụrụ etinyere na iwu nhazi, ọ na-abanye. Nke a bụ otu ị mara mgbe, ebe na etu ọgụ ahụ siri mee.
Snort nwere nchekwa data nke ọgụ nke a na-emelite mgbe niile site na ịntanetị. Ndị ọrụ nwere ike ịmepụta akara aka dabere na njirimara nke mwakpo netwọk ọhụrụ wee nyefee ha na ndepụta nzipu ozi nke Snort, ụkpụrụ omume a nke obodo na ịkekọrịta emeela ka Snort bụrụ otu n'ime ndị IDs kachasị ewu ewu na nke kachasị ọhụrụ. .
Snort 3 ikpeazụ beta isi
Na beta ikpeazụ a, Snort na-ewebata mgbanwe na usoro nhazi ọhụrụ nke ahụ awade a simplified syntax na-enye ohere iji ihe edemede maka ike nhazi usoro. A na-eji LuaJIT hazie faịlụ nhazi. A na-enye plugins ndị dabeere na LuaJIT na mmejuputa nhọrọ ndị ọzọ maka iwu na usoro ndekọ;
Emeziwo injin iji chọpụta mwakpo, emezigharị iwu ahụ, Enweela ike ijikọ buffers na iwu (edozi echekwa) agbakwunyere. Ihe nyocha Hyperscan gụnyere, na-enye gị ohere iji usoro triggered ngwa ngwa na nke ziri ezi dabere na ngosipụta oge niile na iwu gị;
Agbakwunyela usoro introspection ọhụụ maka HTTP, na-eburu n'uche ọnọdụ nke nnọkọ ahụ wee kpuchie 99% nke ọnọdụ ndị a na-akwado ụlọ nnwale HTTP Evader. A na-emepe koodu ahụ iji kwado HTTP / 2.
Omume nke nyocha nyocha miri emi rịrị elu nke ukwuu. Agbakwunyere ikike ịhazi ọtụtụ ngwugwu, na-enye ohere ka ị na-ejikọta ọtụtụ ndị na-ejizi ngwugwu ma na-enye ọnụọgụ usoro nke dabeere na ọnụ ọgụgụ CPU.
E tinyegoro ebe nchekwa nhazi na tebụl a na-ahụkarị, nke a na-ekekọrịta na sistemụ dị iche iche, nke mere ka o kwe omume belata oriri nchekwa site na iwepu mbiputegharị nke ozi;
Na mgbakwunye, a nihe omume ọhụụ nke na-eji usoro JSON ọ na-ejikọtakwa ngwa ngwa na nyiwe ndị dị na mpụga dịka Elastic Stack.
Ọzọkwa A na-eme ka mgbanwe nke usoro ihe owuwu pụta ìhè, ikike ịgbatị arụmọrụ site na njikọ nkwụnye na ntinye nke usoro ntanetị dị n'okpuru n'ụdị plug-ins na-anọchi anya.
Ugbu a, Snort 3 etinyeworị ọtụtụ narị plugins nke na-ekpuchi mpaghara dị iche iche nke ngwa, dịka ọmụmaatụ, na-enye gị ohere itinye koodu nke aka gị, usoro nyocha, ụzọ ndebanye aha, omume na nhọrọ na iwu, na mgbakwunye na nchọpụta akpaka. na-ewepụ mkpa ọ dị iji aka gị kọwaa ọdụ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ na ntanetị.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya ma ọ bụ nwaa beta a, ị nwere ike ịlele nkọwa dị na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » E wepụtala beta ikpeazụ nke Snort 3, sistemụ nchọta intrusion nke netwọkụ
Ckerlọ Docker: Learningmụta ntakịrị ihe banyere teknụzụ Docker